Embindini we-quadrilateral yaseRoma, kwi-Contrada dei Guardinfanti ecebisayo, egcwele iivenkile kunye neeklabhu, isitudiyo esikhulu esineebhedi ezi-3, ezilungele izibini, iintsapho kunye nabahambi bodwa abafuna ukufumanisa iTurin ukuqala kwiziko layo lembali.
Indawo enkulu yestudio kumgangatho wokuqala wesakhiwo kwiziko lembali laseTurin, ecaleni komhambi ngeenyawo Via Garibaldi, uhamba ngomzuzu omnye ukusuka ePiazza Castello kwaye ilungele izikhululo zePorta Nuova kunye nePorta Susa.
Itholakala kwisakhiwo esilungisiweyo ekupheleni kwe-90s, kunye ne-lift, kwaye ixhunywe ngokufanelekileyo kwiindlela eziphambili zezithuthi zikawonkewonke.
Izolile kwaye yamkelekile, le ndlu isandula ukulungiswa kwaye ilungele abahambi bodwa, izibini ezitshatileyo kunye neentsapho ezifuna ukutyelela isixeko ukusuka kwiziko lembali.
Ixhotyiswe ngebhedi egotywayo kunye nebhedi yesofa, zombini ezineebhedi eziphindwe kabini zaseFransi, indawo yekhitshi enefriji, isitovu, imicrowave, umatshini wekofu kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko. Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nomatshini wokuhlamba. Phakathi kweenkonzo ezikhoyo: iTV, i-wi-fi, ukufudumeza okuzimeleyo, isomisi seenwele, intsimbi.
I-300m ukusuka e-Piazza Castello kunye ne-500m ukusuka e-Piazza San Carlo
1km ukusuka kwizikhululo zasePorta Nuova nasePorta Susa
1 km ukusuka kwiMole Antonelliana (iMyuziyam yaseCinema)
Le propati ikwi-0.8 yeemayile ukusuka e-Piazza Vittorio Veneto
Ungasoloko unxibelelana nam ngolwazi malunga nokuhlala kunye nesixeko